ကျွန်တော့်ရဲ့ Diary လိုမျိုး မှတ်စု စာအုဎ်လိုမျိုး အသုံးချသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်.....
Forget those things that make you unhappy and forgive those people who bring you happiness.....
Personal Health and Beauty (1)
စပ်မိစပ်၇ာ ဘာညာကွိကွ... (5)
တခါတုန်းက ကျောင်းသားဘ၀...... (2)
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်တ် ဘီလ်ဂိတ်စ်တဖြစ်လဲ ရက်ရောသူအလှူရှင...
For Boyfriends & For Girlfriends
မြန်မာBLOG နှင့် ကျွန်တော့်ဧ။် ဒုက္ခ……
ကျွန်တော့် ရဲ့ E-Mail ပါ။
----------*အငတ်ဘေးနှင့်ကြုံတွေ့နေရသော မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကို စစ်အာဏာရှင်များ၏အသိဥာဏ်မဲ့ အုပ်ချုပ် မင်းလုပ် သွေးစုပ်မှုများအောက်မှ လွှတ်မြောက်ရန် သင့်အားလိုအပ်နေပါသည်။*------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ -------အကြမ်းမဖက် ဆန့်ကျင်ရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သင့်သူများ
၁. အငတ်ဘေးကြုံတွေ့နေကြသူများ (အခြေခံလက်လုပ်လက်စားများ) . ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်အမားများ . စက်ရုံ အလုပ်ရုံ အလုပ်သမားများ . နေ့စား အချိန်စား အလုပ်သမားများ . ပြန်ကျ အလုပ်သမားများ . လယ်သမား . ဆုက္ကားသမားများ . လိုင်းကားသမားများ . တက္ကဆီသမားများ
၂. ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများမှ ၀န်ထမ်းများ . ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းများ . စူပါမားကတ်ဝန်ထမ်းများ . ဟိုတယ် ၀န်ထမ်းများ
၃. အစိုးရ ၀န်ထမ်းများ . ရာထူးအဆင့်ဆင့်မှ ၀န်ထမ်းများ
၄. အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်များ
၅. စစ်အစိုးရမှ ကောင်းကျိုးရမထားသူများအားလုံး
၆. ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ--------------------------------- -------------------------------------------------------------------ပါဝင်သူသည် အောက်ပါ အရည်အချင်းများထဲမှ အနည်းဆုံး တစ်ရပ်နှင့် အထက်ရှိရပါမည်
၂. ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးပွားသူဖြစ်ရမည်
၃. နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်ရမည် ၄. နိုင်ငံတော် အလံ၊ မှတ်တံဆိပ်နှင့်နိုင်ငံတော်သီချင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုဆန့်ကျင်သူဖြစ်ရမည်၅. စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အားပေးထောက်ခံသူဖြစ်ရမည်
၆. နအဖ စစ်အစိုးရ၏ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကျူးကျော်ဖျက်ဆီးမှုထက် ပိုမိုဆိုးရွားသော လမ်းစဉ်ကို ဆန့်ကျင်ရမည်
၇. နေ့စား ကြံ့ဖွတ်များနှင့်တကွ နအဖ ၏ အခိုင်းအစေ တေလေကြမ်းပိုးများကို ရွံရှာရပါမည်။-------------------------------------------------------------------------------------------- -------လှုပ်ရှားမှု အသေးစိတ်ရှင်းလမ်းချက်ဦးနှောက်မဲ့သော ပြုမူချက်များကို လုံးဝ ဆန့်ကျင်ကာ ကိုယ်တိုင် တတ်စွမ်းမှုဖြင့်လှုပ်ရှားရမည်
၁. မိမိတို့ အခြေခံလူတန်းစားများအနေနှင့် စစ်အစိုးရ၏ လူမဆန်သောလုပ်ရပ်များကြောင့် တွေ့ကြုံနေရသည့် အငတ်ဘေး ပြဿနာကို အရေးတကြီး ဖြေရှင်းပေးရန်လိုနေပါသည်။ သို့ပါ၍ မကြေနပ်မှုကို ပြသရန်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခြင်းဖြင့် လိုင်းကားခသည် လုပ်အားခထက်ပိုများနေကြောင်းကိုကမ္ဘာကသိအောင် ပြသရမည်။
၂. ပုဂ္ဂလိဝန်ထမ်းများအနေနှင့်လည်း တူညီသော ပြဿနာရှိနေမည်မှာ မလွဲဧကန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများသည် စစ်အစိုးရဗိုလ်ကြီး၊ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် ရှယ်ယာမျှယူနေကြပြီး အမြတ်အစွန်းများကို သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းလောက်သာ လစာပေးနေကြသည်။ နိုင်ငံတော်ကြီး ပျက်စီးမှုကြီးတွင်စစ်အစိုးရကို ကြည်ဖြူကြသော လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများလည်း အပြစ်ရှိကြသည်။
၃. အစိုးရ၀န်ထမ်းများသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အလုပ်လုပ်ရမည်။ ပြည်သူ့များကိုအလုပ်အကြွေးပြုရမည်။ စစ်အစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်၊ ပြည်သူများအား သွေးစုပ်နေခြင်း၏ ဒုတိယ တရားခံမဖြစ်သင့်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင့်၏ ရင်ဘတ်ကိုပြန်စမ်းကြည့်ရင် ငါဘာလုပ်သင့်သည်ကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ရပ်လုံး တစ်နိုင်ငံလုံး ရုံးမတက်ပဲ ဆန္ဒပြမှုကြီးတစ်ရပ်ကို သင့်ပါဝင်ပါ။ ကူညီပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၄. အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်များသည် ငွေအရင်းရှင်များနှင့် စစ်ဗိုလ်များပေါင်းစားကာ နိုင်ငံတော်၏ အသေးစားစက်မှုလက်မှုနှင့် တစ်ခြားလုပ်ငန်းများအား ၀ါးမြိုနေကြသည်ကိုသတိပြုမိသင့်ပါသည်။
၅. သင်သည် သင့်ပတ်ဝန်းကျင် သင့် မိသားစု သင့်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများထဲတွင်စစ်အစိုးရ၏ မတရားအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ရဲများမှ ပိုက်ဆံညစ်ခြင်းများကို နိစ္စဓူဝတွေ့မြင်နေရသူဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော် တည်ဆောက်ခြင်းတွင် ငှက်ဖျားရောဂါနှင့်သေဆုံးခဲ့သော ဆောက်လုပ်ရေးသမားများ၏မိသားစုများ၊ စစ်မုဒိမ်းမှုများမှတရားအနိုင်ကျင့်ခံရသူများဖြစ်သူပါသည်။
၆. ဆေးတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်၊သိပ္ပံနှင့် ၀ိဇ္ဇာတက္ကသိုလ်များနှင့် အခြားအခြားသော တက္ကသိုလ်အားလုံးမှကျောင်းသားများ ပါဝင်ရပါမည်။ စစ်အစိုးရသည် ကျောင်းသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်ကို မငဲ့ပဲ အရည်အချင်းကျဆင်းစေခဲ့ပါသည်။ တက္ကသိုလ်များကို ဆရာအင်းအား၊ ပစ္စည်းအင်အားမထောက်ပံ့ပဲ ကျောင်းသားများကို အရည်အချင်းကျဆင်းစေခဲ့ပါသည်။စစ်ဘက်တက္ကသိုလ်များနှင့် ယျဉ်ကြည့်လျှင် သိသာပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်နှင့် လွတ်လပ်ပြီးခေတ်တို့၏ မြန်မာကျောင်းသားများ၏ အရည်အချင်းနှင့် ယှဉ်လျှင်မည်မျှလောက် အဆင့်အတန်းကျဆင်းနေပြီဆိုတာကို သိသာပါသည်။ ယနေ့ခေတ်စစ်အစိုးရလက်အောက်ခံ ပါမေက္ခများ ၊ ကထိကများ၏ ဦးဆောင်မှု အောက်မှတက္ကသိုလ်ပညာရေးသည် နိုင်ငံခြားတွင် အလုပ်လုပ်နေကြသော မြန်မာများ အသိဆုံးဖြစ်ပါသည်။ (လုံးဝ အသိအမှတ်မပြုခံရပါ။)------------------------------------------
ထို့ကြောင့် သြဂုတ် ၂၃ ။ ၂၀၀၇ - မြို့တော်ခန်းမရှေ့ အကြမ်းမဖက်ဆန္ဒပြပွဲကြီးကိုထောက်ခံကြောင်းကို အထက်ပါကဏ္ဍအလိုက် မိမိတို့ နေရာယူပေးကြပါ။ ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------
Posted by mynet at 9:56 AM3comments
Labels: စပ်မိစပ်၇ာ ဘာညာကွိကွ...
ကျွန်တော်တွေ့မိတာလေးတစ်ခုကို share်ပေးလိုက်တယ် ။ တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဗျ။
Posted by mynet at 9:42 AM0comments
“““ လုပ်ငန်းတစ်ခုဧ။်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက သူ့လုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမြည့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသောManager များ သို့မဟုတ် First Man များလိုအပ်ကြောင်း၊ သူ့တွင်ရှိသော လူအများစုမှာ Second Man များသာ များနေကြောင်း၊ သူလည်းလက်လှမ်းမီသလောက် ကြီုးစားရှာနေကြောင်း နှင့်မည်သို့ပြုလုပ်လျှင်ကောင်းမည်နည်းဟုပြောဖူးသည်။သူ့လိုပင် ယခုတလော လုပ်ငန်းရှင်အတော်များများတွင် အလားတူပြသာနာမျိုးနှင့်ကြုံတွေ့နေကြရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အလုပ်ရှာနေသောလူငယ်တစ်ဦးက သူ့တွင် သင်တန်းအမျိုးမျိုးကရခဲ့တဲ့ certificate အများကြီးရှိသော်လည်း ယခုအထိ အလုပ်ကောင်းကောင်းမရသေးကြောင်းနှင့်ရသော အလုပ်များမှာလည်း သူရခဲ့သော certificate များနှင့်ယှဉ်လျှင် များစွာနိမ့်နေသဖြင့်မလုပ်နိုင်ကြောင်းပြောဖူးသည်။သူ့လိူလူငယ်များလည်းအများကြီးတွေ့နေရပါသည်။
ဒီနှစ်ခု ဘာကြောင့်ဟနေရသနည်းဆိုတာကို သုံးသပ်ကြည့်ဖို့တော့လိုမည်ထင်သည်။လုပ်ငန်းရှင်များဘက်ကလည်း မိမိတို့အလိုရှိသော အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့်မန်နေဂျာများလိုချင်သလို အရေအချင်းပြည့်ဝသောမန်နေဂျာများကလည်းသူ့နေရာနှင့်သူနေရာရပြီးဖြစ်နေသည်ကများသည်။သူတို့ကိုလိုချင်လျှင်လည်း သူများကပေးတာထက် ပိုပေးမှရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။သို့မဟုတ်ပါကအရည်အချင်းပြည့်ဝသောမန်နေဂျာတစ်ယောက်ကိုရဖို့ရန်မှာမလွယ်ကူပေ။ပိုပေးတိုင်းလည်း လာချင်မှလာကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ မိမိတို့တွင်ရှိသော Second Man များကို First Man ဖြစ်လာအောင်ကြီုးစားလျှင်ကော ဖြစ်လာနိုင်စရာ မရှိဘူးလားဟုစဉ်းစားမိပါသည်။ အချိန်ပေးဖို့တော့ လိုမည်ထင်သည်။
အလားတူ certificate တစ်ထပ်ကြီးကိုင်ပြီး အလုပ်ရှာနေသောသူအဖို့ကလည်း အလုပ်မရတိုင်း စိတ်ဓာတ်ကျနေဖို့မလိုပေ။ မိမိဘက်က မည်မျှလုပ်တတ်၊ လုပ်နိုင်ကြေင်း ပြသခွင့်ရဖို့လိုသည်ကို သတိပြုရပေမည်။ certificate အများကြီးရှိတိုင်းလုပ်ငန်ူးရှင်ဘက်ကလည်း လစာအများကြီးပေးပြီးတန်းခန့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မိမိဧ။်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊လုပ်ချင်စိတ်ရှိမှု၊စာတွေ့နှင့်လက်တွေ့ ပေါင်းစပ်အသုံးချနိုင်မှုများအပေါ် ကြည့်ပြီးမှသာ ဆုံးဖြတ်ကြမည်ဖြစ်လေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အလုပ်ရှာနေသော လူငယ်များအဖို့မိမိတို့ဧ။် certificate ကိုသာ ကြည့်မနေဘဲ အစပိုင်းတွင် အနစ်နာခံပြီး မိမိဧ။် အစွမ်းအစကိုပြသနိုင်ရန် အချိန်ယူဖို့လိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များဘက်မှလည်း အရည်အချင်းပြည့်ဝသော First Man များကိုချည်း လိုက်ရှာမနေဘဲ မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှ Second Man များကို First Man အဖြစ်သို့ရောက်အောင် အချိန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးသင့်ကြကြေင်းတင်ပြလိုက်ရပါသည်။ ”””
ဂျာနယ်တစ်ခုမှ အယ်ဒီတာ ပြောထာတဲ့စကားလေးပါ။မှန်ပါတယ် သူပြောတာ။
ဘယ်တုံးကထဲက၀င်နေတဲ့ ဘ၀င်မြင့်ရောဂါလည်းမသိဘူး သူများခိုင်းဖက်လုပ်ရမဲ့အလုပ်ဆိုလုံးဝလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။။
ခုတော့ အပေါ်က အယ်ဒီတာ ပြောသလိုပဲ၊ အတွေးအခေါ်တွေပြောင်းလဲဖို့စတင်လိုက်ပါပြီ။
လှေခါးတစ်ခုကို အောက်ခြေကနေအပီအပြင် တက်တော့မယ်ဗျာ။
Posted by mynet at 2:55 AM2comments
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်တ် ဘီလ်ဂိတ်စ်တဖြစ်လဲ ရက်ရောသူအလှူရှင် ပရဟိတသမားကြီး ဘီလ်ဂိတ်စ်
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလ (၃၀) ရက်ကစပြီး ကမ္ဘာတ၀န်း ဈေးကွက်တင်ရောင်းခဲ့တဲ့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်တ်ရဲ့
၀င်းဒိုးစ်ကွန်ပျူတာစနစ် (Windows Operating System) သစ်၊ ၀င်းဒိုးစ်ဗစ်စ်တာ (Windows Vista) ဟာ ဘီလ်ဂိတ်စ်အတွက်တော့ ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန် ဖြစ်ပါ တော့မယ်။ အသက် (၅၁) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဘီလ်ဂိတ်စ်ဟာ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်တ်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကနေ နောက်နှစ်မှာ အနားယူပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုဒါနပြု ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ အာရုံစိုက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
၀င်းဒိုးစ်ဗစ်စ်တာကို ဈေးကွက်ထဲပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နည်းပညာရဲ့အနာဂတ်အကြောင်း၊ ပညာရေးကို ဘယ်လိုပြုပြင်ကြမလဲ၊ သူ့ရဲ့သားကိုတောင်မှ ကွန်ပျူတာ သုံးတဲ့နေရာမှာ ဘာ့ကြောင့်ကန့်သတ်ထားသလဲ စတာတွေကို တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ သတင်းထောက်နှစ်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့ထုတ် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အဲဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကို ကောက်နုတ်ဘာသာပြန်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မေး - မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့သားသမီးတွေ ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အပေါ် အတော်လေးထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဗစ်စ်တာကပေးထားတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျားရဲ့တွေးမြင်ပုံက ဖခင်တယောက်အနေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီလား။
ဖြေ - ဘယ်နှစ်နာရီပဲ ကွန်ပျူတာသုံးရမယ်ဆိုတာ ကျနော့်သားကို ကျနော်ကန့်သတ်ထားတယ်။ သူကတော့ အဲဒါကို အတော်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ပဲ။ “ကျနော့်ဘ၀တလျှောက်လုံး ဒီလိုပဲ သွားတော့မှာလား” လို့ သူကမေးတယ်။ အရွယ်ရောက်ရင်တော့ သူ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ ၀ယ်နိုင်လာမှာပေါ့ဗျာ။
မေး - ဆွစ်ဇာလန်က ဒါးဗို့စ်မှာလုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်* မှာ ဒီနှစ် ခင်ဗျားပြောခဲ့တာတခုက ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ အနာဂတ်အကြောင်းနော်။
ဖြေ - ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ တီဗွီအစီအစဉ်တွေကို အင်တာနက်ကနေတဆင့် ပို့မယ်ဗျာ။ ဒါဆိုရင် တီဗွီလိုင်းတွေပြောင်းဖို့ ခင်ဗျားစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး။ သတင်းအစီအစဉ်တခုရှိမယ်ဆိုပါစို့၊ ခင်ဗျားက ဘောလုံးပွဲကြိုက်တဲ့လူဆိုရင် ခင်ဗျားကို ကျနော်တို့က ဘောလုံးပွဲအကြောင်းပိုပြမယ်။ နောက်မြို့တမြို့က ရာသီဥတုအကြောင်း ခင်ဗျားသိချင်တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားအတွက် သတင်းထဲမှာ အဲဒါပါလာမယ်။
မေး - ဒါဆို ကျနော်တို့လို ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေရဲ့ အနာဂတ်က ဘယ်လိုများပါလိမ့်။
ဖြေ - ကျနော်တို့လိုက်နေတဲ့ နောက်လာမယ့်ဟာတွေထဲမှာ တခုက ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေအတွက် သုံးတဲ့ငွေကို ကလေးအားလုံးအတွက် တက်ဘ်လက်တ် (Tablet) ကွန်ပျူတာလေးတွေ ၀ယ်တဲ့နေရာမှာသုံးလိုက်ရင် ကလေးတွေ သယ်ရပိုးရတာ နည်းသွားမယ်ဗျာ။ အဲဒါက ပိုပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရသလို ထိတွေ့ကိုင်တွယ် ဆက်သွယ်ရတာ ပိုကောင်းလာတာပေါ့။
မေး - တခြား ဘယ်လိုနည်းပညာအပြောင်းအလဲတွေ သိပ်မကြာခင်မှာဖြစ်လာဖို့ ခင်ဗျားမြင်ထားလဲ။
ဖြေ - အင်း … မိုက်ခရိုဆော့ဖ်တ်မှာ သိပ်ကိုထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ သုတေသနအဖွဲ့ရှိတဲ့ အားသာချက် ကျနော့်မှာ ရှိထားတယ်ဗျ။ စက်ရုပ်နည်းပညာ၊ စကားသံကိုနားလည်တဲ့နည်းပညာနဲ့ တပြိုင်နက် တည်းမှာ အလုပ်မျိုးစုံလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးဖြစ်ထွန်းမှုတွေကို သူတို့လိုက်နေကြတယ်။ ဒီအိပ်မက်တွေဟာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကျနော်တို့တွေမက်ခဲ့ကြတဲ့ အိပ်မက်တွေပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ ကွန်ပျူတာကို စကားပြောလို့ရတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူဆိုတာကို သိနိုင်တဲ့ ကင်မရာတပ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာမျိုးပေါ့။ ကြည့်မှန်က သာမန်ကြည့်မှန်သက်သက်မဟုတ် တော့ဘဲ ခင်ဗျားအ၀တ်အစားဝတ်ပြီး ကြည့်လိုက်ရင် “ကိုယ့်လူရေ … ဒီအ၀တ်အစားနဲ့တော့ ကြည့်မကောင်းဘူး” လို့ပြောမယ့် ကြည့်မှန်မျိုးပေါ့။ နေရာတိုင်းမှာ ဖန်သားပြင်တွေ တပ်ထားမယ်ဆိုရင် တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာ။
မေး - ခင်ဗျားအိမ်မှာ လုပ်ထားတာမျိုး မဟုတ်ဘူးလား။
ဖြေ - ဟား … ကိုယ့်လူရေ၊ ကျနော့်အိမ်မှာက နေရာတိုင်းမှာ ဖန်သားပြင်အကြီးကြီးတွေ တပ်ထား ပြီးပြီဗျ။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်ကတည်းက ကျနော်လုပ်ပြီးသွားပြီ။ စိတ်ကူးကတော့ဗျာ ကျနော်တို့ ခရီးထွက်သွားမယ်၊ အိမ်ပြန်ရောက်လာတာနဲ့ ခရီးထွက်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ အိမ်က ဖန်သားပြင်တွေမှာ မြင်နေရတာမျိုးပေါ့။ အခုကနေ နောက်ငါးနှစ်အကြာမှာ မွေးလာမယ့် ကလေးတယောက်အတွက် ဒီလိုမျိုး အမှတ်တရဖြစ်ရပ်တွေကို အလွယ်တကူ မှတ်တမ်းတင်လို့ ရလာမယ့်ကိစ္စက အစစအရာရာ မှတ်တမ်းလုပ် ရေးမှတ်သိမ်းဆည်းတတ်တဲ့ စနစ်တကျအရှိဆုံး မိခင်တွေရဲ့ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာမှာပေါ့။
မေး - အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀က တချို့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ မှတ်တမ်းတွေ လုံးဝပျောက် သွားမှာကိုတော့ လူအတော်များများက စိတ်သက်သာရာ ရကြမှာပဲ။
ဖြေ - အင်း … အဲဒါ မှန်တယ်ဗျ။ ဒီအခြေအနေတွေကို ငြင်းဆန်ဖို့က ပိုခက်လာမယ်ဗျာ။
မေး - ပညာရေးက ခင်ဗျား အဓိကအာရုံစိုက်တဲ့ကိစ္စတခုပဲ။ ဒီတော့ နည်းပညာကိုသုံးပြီး ပိုကောင်းတဲ့ လေ့လာသင်ယူမှု ဖြစ်လာမလား။
ဖြေ - ပညာရေးအကြောင်းပြောရင် နှိမ့်နှိမ့်ချချရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်ဗျ။ ဘာလို့လဲဆို ရုပ်မြင်သံကြားက ပညာရေးကို ပြောင်းတယ်ဗျာ၊ ဗွီဒီယိုတိပ်ခွေက ပညာရေးကို ပြောင်းတယ်ဗျာ၊ ကွန်ပျူတာ အထောက်အကူပြု သင်ကြားနည်းက ပညာရေးကိုပြောင်းတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှာ အင်တာနက် အကြီးအကျယ် မဖြစ်ထွန်းလာခင်ထိကတော့ နည်းပညာက ပညာရေးပေါ် တကယ့် တကယ်သက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူးဗျ။ သင်ယူတယ်ဆိုတာ အများအားဖြင့်တော့ စိတ်ခွန်အား လှုံ့ဆော်မှုအတွက် အခြေခံအမြင် ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တည်းပေးတာပါပဲ။ ကိစ္စရပ်တွေကို ခင်ဗျား ဘာကြောင့်သင်ယူသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပေါ့။ နည်းပညာက အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းပညာဟာ မျက်လှည့်ပြသလိုကုတဲ့ (၉၆) ပါးရောဂါပျောက်ဆေးတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။
မေး - နည်းပညာက ပရဟိတလုပ်ငန်း လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကို ပြောင်းလဲစေသလားဗျာ။
ဖြေ - နည်းပညာက ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကို နည်းပညာက အမြဲတမ်း နားလည်ရမယ်ဗျ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေက ကွန်ပျူတာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲ မလားဗျာ။ တိုင်းပြည်အများကြီးမှာဆို အဲဒါထက်တောင် ပိုပါသေးတယ်။ စာသင်ခန်းတွေရှိရဲ့လား၊ ဆရာ ဆရာမတွေ ရှိရဲ့လား၊ လျှပ်စစ်မီးရှိရဲ့လား ဆိုတာတွေပေါ့။ နည်းပညာသစ်တွေယူပြီး အဲဒါတွေသုံးဖို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကို တွန်းတာဟာ ရူးသွပ်တာပဲဗျ။
မေး - ခင်ဗျားရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အနာဂတ်အကြောင်း ပြောရအောင်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်တ်မှာ ခင်ဗျားရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို လျှော့ချလိုက်ပြီပေါ့။
ဖြေ - ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ကနေစလို့ ကျနော့်ရဲ့ ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်း** မှာ အချိန်ပြည့် လုပ်ပြီး မိုက်ခရိုဆော့ဖ်တ်မှာ အချိန်ပိုင်းပဲလုပ်တော့မယ်။ ဒါ တကယ့်ကို အပြောင်းအလဲကြီးပါ။ နိစ္စ ဓူဝကိစ္စတွေမှာ ကျနော်မပါတော့ဘူးလေ။။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ဗျာ အဲဒီပေါ် ဘယ်လိုခံစား မိမလဲဆိုတာကို ကျနော် မသိပါဘူး။
မေး - ဒါဆိုရင် အခု ၀င်းဒိုးစ် (Windows Vista) ကို ဈေးကွက်တင်တာဟာ ခင်ဗျားအတွက် နောက်ဆုံးပေါ့။
ဖြေ - ဒါ ကျနော့် နောက်ဆုံးပေါ့။ ဒါပေမယ့် နောက်ကိုးလအတွင်းမှာ နောက်ထပ် Office Software (Microsoft Office) နဲ့ ၀င်းဒိုးစ်ရဲ့ အဓိကကဏ္ဍသစ်တွေကို ရွေးချယ်ပြီးမှာဆိုတော့ ကျနော့်အတွက် နောက်တကြိမ်တော့ ရဦးမယ်ဗျ။ အဲဒါတွေ ဈေးကွက်တင်တဲ့အခါ သူတို့ ကျနော့်ကို ဖိတ်ချင် ဖိတ်မှာပေါ့ဗျာ။ ။
* World Economic Forum** Bill and Milanda Gates Foundation. (For more info visit : http://www.gatesfoundation.org)10 Questions for Bill Gates: Richard Stengel and Lev Grossman. 12 Feb 2007 TIME Magazine
Posted by mynet at 3:18 PM0comments
နေ့စဉ်ဓူဝလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ လူတွေအတွက်ကြုံတဲ့နေရာကနေ အဆင်ပြေသလို ဖော်ပြပေးထားတာပါ။
၁။ နေ့စဉ်ရေချိုးပါ။ အထူးသဖြင့်ချွေးထွက်များသော လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုကို လုပ်ပြီးချိန်တွင်ချိုးပါ။
၂။ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ဂျိုင်းမွေးရိတ်ခြင်းအားဖြင့် ထွက်လာသောချွေးများသည် အမွေးအမှင်များထဲတွင် စုအောင်မနေတော့ပါ။
၃။ ရေချိုးပြီးချိန်တွင် ခန်ဒါကိုယ်တစ်ခုလုံးအား ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။ သန့်ရှင်းပေမယ့် သိပ်ပြီးနုညံ့သော ကိုယ်သုတ်ပ၀ါထက် အနည်းငယ်ကြမ်းသော ကိုယ်သုတ်ပ၀ါက အလုပ်ပိုဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အနံ့ပျောက်ဖို့ ရေမွှေးတွေ၊ ပေါင်ဒါတွေသုံးခြင်းဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ ချွေးနံ့နဲ့ရောပြီး အပိုမိုဆိုးဝါးသော အနံ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
၅။ ကိုယ်သုံးနေကျ အနံ့ပျောက်ဆေးတွေကိုသာ သုံးပါ။
၆။ အ၀တ်အစားတွေကို ပုံမှန်လျှော်ပေးပါ။
၇။ အရမ်ကျပ်သော အ၀တ်အစားများထက်၊ ချောင်ချိသက်သာသော အ၀တ်အစားများကို ၀တ်ဆင်ပါ။
၈။ ချည်ထည်နှင့်ပြုလုပ်သော အတွင်းခံများကို ၀တ်ခြင်းဖြင့် ချွေးအောင်းနေသော အဖြစ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
၉။ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်၊ သုံးက်ြမ်ထက်ပိုပြီးလည်း ရေမချိုးပါနဲ့။ အရေပြားပေါ်က အနံ့ဆိုးတွေကို ပျောက်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယား ပိုးတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့ အတွက် ပြသနာပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ တစ်ချို့ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေမှာ chlorophyll ပါဝင်ပြီး သဘာဝအနံ့ပျောက်ဆေး ဖြစ်တာကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများစားပေးခြင်းကြောင့် ကိုယ်နံ့ဆိုးထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ရေများများသောက်ပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ
Posted by mynet at 2:53 PM0comments
Labels: Personal Health and Beauty
ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ရေနံဈေးတွေကစားနေလိုက်လဲတော့မသိဘူး
လောလောဆယ် ရန်ကုန်မှာ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်ကုန်ပြီိီိီ။
အရင်တုန်းက Bus ကားခ ၅၀ိ/- ဆိုတာက အခု ၁၀၀ိ/- တဲ့ဗျ .. သိတဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်မှာက ဘယ်သွားသွားဗျာ Bus ကားနဲ့ပဲ အားလုံးသွားနေကြရတာ အခု Bus ကားခတွေ့ က ၁၀၀ိ/- ဆိုတော့ အမလေး လေး . . .. ..
ဒါ Bus ကားခပဲရှိသေးတာ လားအုံးမှာထပ်ပြီး ဟိုဈေးဒီဈေးတွေ။ ကျွန်တော်အခု Company တစ်ခုမှာလုပ်နေတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ တစ်လစရိတ်ဆိုရင် ထမင်းတစ်နပ်စာကို ၅၀၀ိ/- နဲ့ပဲ တွက်အုံး ထမင်းနှစ်နပ် ၁၀၀၀ိ/- နဲ့ အလုပ်အသွားအပြန် ကားခ ၂၀၀ိ/- ဆိုတော့ တစ်ရက်ကို အနည်းဆုံး ၁၂၀၀ိ/- လောက် ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ ကုန်နေပြီ။ တစ်ရက်ကို ၁၂၀၀ တစ်လကို ၃၆၀၀၀ိ/-
Oh my God! ရတဲ့လခတော့ ပြောင်ပါပြီဗျာ !
ကားသမားတွေအနေနဲ့လည်းမှန်ပါတယ်။ ဒီဇယ် တစ်ဂါလံကို ၅၀၀၀ိ/-
ဓါတ်ဆီ တစ်ဂါလံကို ၄၅၀၀ိ/- ဆိုမှတော့ သူတို့လည်း ကားခတွေတက်
သူတို့ အဖြစ်ကလည်းဆိုးတယ်ဗျ၊ ထုပ်ဈေးတွေတက်တော့မယ် ဆိုတာကို ဘာမှလည်းကြိုမကြေညာဘဲနဲ့ရုပ်တရက်ကြီး ဆီဆိုင်မှာဆီသွားထုပ်တော့မှ မျက်လုံးပြူးသွားတာ။
အဲသူတို့ပြူးလာတဲ့မျက်လုံးတွေက နောက်ဆုံး ခရီးသွားတွေစီရောက်သွားတော့တာပေါ့။
အေးလေ ဥယျာဉ်မှူးကောင်းမှ ပန်းပွင့်တွေက လှတော့မှာပေါ့၊
ဘယ်သူ့ကို ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူးဗျာ.....
Posted by mynet at 9:31 AM0comments
Posted by mynet at 9:10 AM0comments
READ IT VERY CAREFULLY……………………………………………………………………… ..
Even If you have nothing, you can get anything. But your attitude should be positive
Posted by mynet at 1:44 PM0comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ် လောက်ဂတဲက ဗူးယိုပြီး မြန်မာtyping ကိုမလေ့ကျင့် ခဲ့တာ ခုမှာ့ ဒုက္ခ လှလှ ကြီး တွေ့နေပြီ။
ရေးချင်ဇော နဲ့ရေးနေပေမဲ့ Myanmar Keyboard Layout စာရွက်ကြီးကြည့်လိုက် Keyboard ပေါ်မှာရှာလိုက် နဲ့ သံသရာလယ်နေတာ ဒီ post လေးတစ်ခုပြီးဖို့ကိူ တစ်နာရီလောက်ကြာ သွားပြီ…………….
Posted by mynet at 1:23 AM0comments
Pleas Leave your message here.....
Ko Sai Linn Thu
Zaw htike gyi
>Mandalay Bloggers Feeds Network
Copyright 2007. Powered By Yan Naing Soe Win